မီးခိုးကြွက်လျောက် somking gun | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » မီးခိုးကြွက်လျောက် somking gun
မီးခိုးကြွက်လျောက် somking gun
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Mar 16, 2012 in Opinions & Discussion | 16 comments
၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတာနဲ့အမျှ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုအပုပ်နံ့များ ထွက်ပေါ်လို့နေပါပြီ။ မြို့နယ်တိုင်းမှာ မဲစာရင်းကွာဟတာတွေ၊ ရပ်ကွက်တခု လမ်းတခုလုံး မဲစာရင်းပျောက်နေတာတွေ၊ သေသူများ ပြန်ရှင်လာတာတွေ၊ လူတဦးထဲနာမည်နဲ့ အယောက်တထောင်ကျော် ဖြစ်နေတာတွေ ပြောရရင် အောလဘုံ တိုက်နေတယ် (ဘပုရေ စကားခဏ ချေးသုံးခွင့်ပြုပါ)။ ၂၀၁၀ ရွေးဂေါက်ပွဲတုန်းကလည်း ပုံပျက်ပန်းပျက် ကလိန်ကျမှုများ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အန်အယ်လ်ဒီလို အင်အားတောင့်တဲ့ အတိုက်အခံပါတီ မပါဝင်လို့ အသံမထွက် နိုင်ခဲ့ဘူး။ ရွေးဂေါက်ပွဲကော်မရှင်ငှက်ကထ ဥတင်အေးက ပြီးခဲ့တာတွေ ပြီးပါစေတော့၊ ရှေ့ဆက်မဖြစ်အောင် လုပ်ပါမယ်တဲ့။ လွယ်လိုက်တာနော်.. အဲလို လုပ်လို့ရကြေးလား၊ တရားဥပဒေအထက် မည်သူမှ မရှိစေရဆို…။
လက်ရှိ မဲစာရင်းတွေသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်းများကို အခြေခံထားလို့ တရားဥပဒေကြောင်းအရ သိပ်အရေးကြီးတယ်။ ၂၀၁၂ စာရင်း လွဲမှားနေရင် ၂၀၁၀ စာရင်းများ မသေချာဘူး၊ ဒါဆိုရင် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နဲ့ ဘာကောင်ညာကောင်ဆိုနေတာ အတုဖြစ်နေပြီ။ လက်ရှိ သူတို့ရဲ့ ရာထူးအဆင့်အတန်း တရားဝင်မှု မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်တယ်။ တခါ ၂၀၁၀ကနေ ဆက်သွားရင် ၂၀၀၈ခုနှစ် ဆန္ဒခံယူပွဲ မဲစာရင်းကို ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်။ ဒါဆိုရင် ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်၊ ၂၀၁၀ ရွေးဂေါက်ပွဲ၊ ၂၀၀၈ နာဂစ် အခြေခံ ဥပဒေ စတာတွေ အားလုံး စစ်မှန်မှုမရှိ ရလဒ် အတုအယောင် ဖြစ်နေပြီ။ အခုပြောနေတာ အသစ်အဆန်း မဟုတ် အားလုံး သိပြီးသား၊ ပြောချင်တာ သူတို့ခွေထားတဲ့ကြိုးနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ပြန်ချည်မိတာကို…။
တဲ့တဲ့ပြောရရင် ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ သမဒဂျီး၊ ငှက်ကထဂျီး တကောင်မှ မရှိဘူး…။ ဝါးတီးကုတ်ဝတ် ခေါင်းစွပ်အုပ်ထားတဲ့ လူလိမ် လူရှုပ်တွေ… သူခိုး ဓမြတွေဗျို့..။ ဒါကြောင့်မို့ (၁) ဝင်မှန်းသိလျက်နဲ့ ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြိတ်ခံမနေဂျပါနဲ့ (၂) ကြောက်လို့လည်း ငြိမ်ခံမနေဂျပါနဲ့..ရမှန်းသိရင် နောက်တခါ ဆီတောင် စွတ်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး.. .အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် အသွင်းခံရမယ်ဆိုတာ That goes without saying. (တီချယ်ကြီး TTNU သင်ထားတာ ကြောင်ကြီး မမေ့ကြောင်း သက်သေပြလိုက်ပါတယ်)
ကိုကြီးကြောင် အဲ ကိုကြောင်ကြီးရေ အားရပါးရဖတ်သွားပါကြောင်း။
သများတို့ ဥပမာကြီး မဖတ်ရဲ ပါဘူးချင့်။ကြောက်ပါရဲ့ချင့်
NLD အနေနဲ့ ခုယှဉ်ပြိုင်မဲ့ မြို့နယ်တိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
မီဒီယာ အခန်းကလည်းတက်တက်ကြွကြွ အာရုံစူးစိုက်ပီး
တစိုက်မတ်မတ်ပြည်သူနဲ့ အစိုးရ သိအောင်ကြိုးပမ်းသင့်တယ်
ကိုကြောင်ကြီးကို အချဉ်လို့မမှတ်ပါဘူး ။ မီးကင်ပြီးအချဉ်နဲ့တို့စားလို့ရတယ်မှတ်ပါတယ် ။
အဲ့သည်တော့လည်း ကျုပ်တို့တွေ ရှေးလူကြီးတွေအယူအတိုင်း
ပထမတော့ ဘောမတူဘူး ခွဲမယ်ဘာမယ်ပေါ့
ကိုယ့်သမီးကအပျိုပြန်ဖြစ်လာတော့တာမှမဟုတ်တာ ဆိုပြီး ကြိတ်မှိန်ပြီး ဟိုဒင်းလိုက်ပေါ့
ဒါနဲ့ ဆရာကြီးကြောင် စမုတ်ကီးဂန်း ဆိုတာက
ဟိုငခြောက်အောင်ပု ထမီခိုးပြီးအပေါင်ဆိုင်မှာ ပေါင်နှံနေတုန်း ရပ်ကွက်လူကြီးက
အောင်မာအောင်မာ ရာရာစစ တော်တော်ဖင်ပါးဝတယ်
ပြဿနာက လက်ရှိအခြေနေတွေမှာ စစ်အုပ်စုကို ကမ္ဘာက တံခါးတွေဖွင့်ပေးသလောက်
သေခြာတာကတော့ ကျုပ်သိတတ်စကတည်းက လေ့လာသတိထားမိတာလေးနဲ့
ဒီစစ်အုပ်စုကတော့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သွေးတိုးစမ်းနေတာဘဲ
တိုးနိုင်မှ တော်ကာကြ ဆိုသလို အစွမ်းရှိသလောက်ကြိုးစားရမယ်မှတ်ယူမိပါတယ်
( အဲ့ဒါက လက်ရှိ လုပ်နေသူတွေကိုပြောတာ ကျုပ်ပါဘူး )
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ 88 တုန်းကလည်း ရုပ်တရက်ကြီး
ရွေးကောက်တယ် NLD နိုင်တယ် မပေးဘူး
အချိန်စွဲတယ် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တယ် ဒီမိုကရေစီအုပ်စုတွေနိုင်တယ်
ဒါပေမယ့် သန်မဒကတော့ ဘာ့ကြောင့်ထိပ်ပြောင်ဖြစ်သွားသလဲ ကျုပ်လီးခပ်ဝါးဝါးဘဲ
90 နိုင်မှတ်ကို ညတ်ပစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအသစ်နဲ့ ပြန်ညစ်ပတ်တုန်းကလည်း
တော်သေးတယ် အဲ့သည်တုန်းက NLD နှင့်အတစ်ကွသော အဖွားကြီးက
ဒါတောင် သူ့ဖာသာ မျက်ခွက်ပြောင်ပြီး သမ်မဒ ဖြစ်လာသေးတာဘဲ
သမ်မဒကြီးထိပ်ပြောင်ကို ဒဂဘာလုံးဂ သမ်မဒ ပါဆိုပြီး အသိမှတ်ပြုကြတာပေါ့ဗျာ
အဲ့သည်အခါကြမှ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလည်း ဆက်ပြီးအကောင်ထည်ဖော်ရသေးတာပ
ဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက် ကို စက်ဘီးလေထိုးကျွတ်ဖါလုပ်ငန်းလေးနဲ့ တွဲဖွင့်ပြီး
ဒါ့ကြောင့် ကျုပ် အရွယ်နုစဉ် မလိမ္မာတဲ့အချိန်က
ငါလိုးမသား အရင်းရှင်တွေ နဲ့
အထူးသဖြင့် မအေလိုးထိပ်ပြောင် တို့အဖွဲ့ကို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆဲဆိုထားမိတာလေးတွေ
ဒီလို မသာမာမှု့တွေ အပုံလိုက်ဆွဲထုတ်ပြနိုင်တာ NLD မို့ပဲ
“အင်အား” ဟာ အရေးကြီးတယ်။
အင်အားကောင်းဘို့ တောင့်ဘို့လိုတယ်။ ဒါမှ လိုအပ်တာလုပ်နိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် ကျုပ်ရင်ထဲ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ –
၁- NLD ကို လူအားသာမက ဖြစ်နိုင်သမျှ ငွေအားအလုံးအရင်းနဲ့ပံ့ပိုးပေးသင့်တယ်။
၂၀၁၅ ဟာ အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အမတ်ဘိုး သိန်း ၅၀၀၀ ကျော်အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စားရိတ် စောင့်ကြည့်စားရိတ် စုစုပေါင်း သိန်းပေါင်း လေးငါးသောင်း သုံးနိုင်ဘို့လိုတယ်။
၂- အခုတလောကြားရတာအပါအ၀င် ပေါ့ – ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားချင်း သွေးကွဲတာ အုပ်စုကွဲတာတွေ မဖြစ်ကြပါနဲ့ဦး။ မြန်မာ့သွေး မြန်မာ့သောက်ကျင့်ကို ဒီမိုကရေစီရပြီးမှ ပြကြပါလို့….။
လက်သီးလက်မောင်း တန်း ပြီး ကို ထောက်ခံသွားပါတယ်။
ကျွန်မလဲ ဒါကိုဘဲ ပွိုင့် လုပ်ပြချင်တာပါဘဲ။
မင်းသားကြီး မှ မလုပ်ရရင် ပတ်ထိုးဖောက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ မများပါစေ နဲ့လို့သာ ဆုတောင်းပါတယ်။
မင်းသားကြီး မှ မလုပ်ရရင် ပတ်မကြီးထိုးဖောက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ မများပါစေ နဲ့လို့သာ ဆုတောင်းပါတယ်။
One thumb up for mr.big cat
Yes lord Latt….
Those guys who throw stones to da train they cant ride must die…
Long live ah mi Myanmar pyi
ယူအက်စ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုတော့.. ပြီးခဲ့တဲ့.. ၁၀စုနှစ်၂ခုကျော်ကတည်းက..ငွေနဲ့တိုင်းနေတာ…
ဒီနှစ်ထဲ.. အိုဘားမားက.. သမ္မတပြန်ရွေးခံဖို့.. ၁ဘီလီယန်ကျော်ရတဲ့အထိ အလှူငွေရအောင်လုပ်မယ်တဲ့..
Barack Obama presidential campaign, 2012 – Wikipedia, the free …
1 Early stages … On May 1, 2011, President Obama ordered the military operation that resulted ….. “Obama’s 2012 Campaign Fundraising Could Top $1 Billion”.
“Don’t pick up the fag-ends! တောင်စဉ်မရေရာတာတွေ လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့။”
Mind your Ps and Qs.မင်းတို့ အပြုအမူတွေ သတိထားပါဦး။
Use your loaf. ဦးနှောက်သုံးပါ။
“Back to square one တိုးတက်မှုမရှိဘဲ ဒုံရင်း ကို ပြန်ဆိုက်မယ်” ဆိုတာသိထားကြပါ။
လို့ သက်ဆိုင်သူ တွေကို တာဝန်ရှိသူများမှ ပြောကြပါ။
ကျွန်မလဲ တီချယ်ကြီး စာကို ပြန်နွေးပါသည်။
ကကြောင်ကြီး အတွက် ကတော့ သိုးဆောင်းလို မပြောချင်တော့ဘူး။ သီချင်းဘဲ ဆိုတော့မယ်။
အာလူးလာမပေးနဲ့။ လေ နဲနဲ လျှော့။ ;-)
အရီးက ဘူတာရုံမှာသင်္ဘောကြိးတွေဆိုက်ခိုင်းဦးမလို့လား မလုပ်ပါနဲ့ ကြောက်ပါရဲ့……….။
လေယာဉ်ပျံဟာ ကြွက်တွင်းထဲကိုဆင်းလိမ့်မယ်………..မယုံမရှိနဲ့ ………တကယ်ပါပဲကွယ်….
အာ………လူး လာ..မပေးနဲ့ ၊ လေကိုနဲနဲလျော့……..ဖွတ်၊ ရှူး…………………………….
အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်ဖေါင်တွေလိုချင်ရင် ဘကြီးဖြန့်ဝေနေပါသဗျား။
(မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်တိုင်တော့ ဖေါင်မဖြည့်ရသေးပါဗျား။)
ဟဲ ဟဲ အလုပ်ဒမား ဒမဂ ဂျီးများပေါ်လာအုံးမယ်လားလို့လေ။